Tuesday October 27, 2020 - 11:58:30 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Waxaa dhawaan soo ifbaxday dhacdo lagu diirsaday waa dilkii macallinkii malcuunka ahaa ee lagu gawracey duleedka magaalada Baariis ee waddanka faransiiska, kaas oo lagu magacaabi jirey Samuel Paty.
Ninkaas oo sababsaday kaddib markii uu ardaydiisa usoo bandhigay sawirro gacmeedyo lagu ihaanaysanayo nabigeenna sharafta leh Muxammed SCW.
Dhacdadaas kaddib waxaa badatay hadalhaynta iyo falcelinta ka dhalatay dilkaas, Madaxweynaha faransiiska ee Makroon oo hore islaamka wax uga sheegay ayaa haddana ku tilmaamay in ay xorriyad tahay sii wadidda sawir gacmeedyada edebdarrada ah.
Madaxweynayaasha Pakistan iyo Turkiga ayaa si qabow u cambaareeyeen Maakroon. Inkasta oo hadalkii loogu qaatay ee loo jeediyaa uu ahaa kii Ordugaan ee uu ku sheegay in Maakroon uu waalanyahay.
Caalamka islaamka oo shucuubtu ay baraarugeen ayaa weli aan helin hogaamiyeyaashii ku habboonaa, Ganacsatada iyo shucuubta muslimiinta ayaa si adag uga gilgishay caayda loo geysanayo nabigeenna suubban waxa aanay shucuubta waddamada qaar joojiyeen isticmaalkii waxsoosaarka faransiiska Waddamada laga joojiyay waxaa hormuud u ah Qadar, Urdun iyo Kuweyd.
Haddaba waxaa isweydiin leh "Maakroon maxaa sababay in uu bartiisa twitter-ka ku soo qoro farriin carabi ah?”.
Qiso culimada dhaqaaluhu tebiyaan ayaa waxa ay tiraahdaa: Qofku marka uu lacagta haysto waxa uu cunaa hilibka digaaga ama doorada ee qaaliga ah, kolkii uu dhaqaalihiisu hoos u dhacana waxa uu quutaa waxsoosaarka digaaga oo looga jeedo ukunta ama beedka.
Dabadeed haddii dhaqaaluhu sii yaraado waxa uu cunaa waxa ay digaagaddu quudato oo dadku siiyaan sida hadhuudhka, marka ugu dambaysa waxa uu noqdaa mid sida digaagadda u dhaqma oo qadhaab taga. Hadda Maakroon iyo waddankiisii waxa ay noqdeen tabtii digaagadda oo qadhaab raadsigii waxa uu ka galey in carabi la qoro iyada oo lagu ladhayo hadallo is adkeyn iyo afgobaadsi ah sida "Waxa aanu garab taagannahay karaamada iyo qiyamka bina aadamka...cidwalba waanu ixtiraamaynaa”isla markaana ay dalbanayaan in xayiraadda laga qaado waxsoosaarkooda. Haddaba marka ay timaaddo in wax la yeelo sharafta rasuulka SCW waa in qofkasta oo islaam ahi u diyaar ahaadaa difaaca nabigeenna SCW.